जर्मनी र स्पेनमा एप्पल नक्साले प्रयोगकर्ताहरूलाई दुर्घटना रिपोर्ट गर्न अनुमति दिनेछ | म म्याक बाट हुँ
जर्मनी र स्पेनमा एप्पल नक्साले प्रयोगकर्ताहरूलाई दुर्घटनाहरू रिपोर्ट गर्न अनुमति दिनेछ
एप्पल नक्सा हरेक दिन सुधार हुन्छ। यो साँचो हो कि यो अझै पनि सेवा बराबर उत्कृष्टता, उदाहरण को लागी, Google नक्सा को रूप मा जान धेरै लामो बाटो छ, तर सत्य यो हो कि केहि वर्ष को लागी, यो धेरै सुधार भएको छ। थप रूपमा, यो भन्नुपर्दछ कि COVID-19 महामारीको समयमा उनीहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई चिकित्सा हेरचाह र खोपको लागि सुरक्षित साइटहरू फेला पार्न मद्दत गर्न धेरै काम गरे। अब, यसले सम्भावना थपेर यसको कार्यहरू विस्तार गर्दछ प्रयोगकर्ता रिपोर्ट दुर्घटना र खतरनाक क्षेत्र। यो जर्मनी र स्पेनमा हुनेछ।
एप्पल नक्सामा नयाँ सुविधा जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई दुर्घटना र खतराहरू रिपोर्ट गर्न अनुमति दिन्छ अब जर्मनी र स्पेन दुबैमा प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपलब्ध छ. यो सुविधा विश्वका विभिन्न देशहरूमा रोल आउट भइरहेको छ र अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, सिंगापुर, बेलायत र अमेरिकामा पहिले नै उपलब्ध थियो। हामीले सुरुमा भनेझैं, एप्पलले यो सेवाको साथ "ब्याट्रीहरू" राख्दैछ।
एप्पल नक्सा प्रयोग गरेर दुर्घटना र खतरा क्षेत्र रिपोर्ट गर्न यो समर्थन थप्न जर्मनी सबैभन्दा नयाँ देश हो। यो सुविधा iOS 14.5 सँग जारी गरिएको थियो र बिस्तारै विश्वव्यापी रूपमा विस्तार हुँदैछ। द्वारा पत्ता लगाए अनुसार Macerkopf, यो सुविधाको साथ अब जर्मनीमा रहन्छ, प्रयोगकर्ताहरूले नयाँ अनुप्रयोग मेनुमा दुर्घटना र खतरा क्षेत्रहरू रिपोर्ट गर्न सक्छन्। दुर्भाग्यवश, को एक प्रयोगकर्ता द्वारा पत्ता लगाइएको रूपमा Reddit, गति जाँच विकल्प प्रयोग गर्न सम्भव छैन, जुन अन्य देशहरूमा उपलब्ध छ। एउटा चूनाको र अर्को बालुवाको, तर ढुङ्गा कम दिन्छ (आज म भनाइहरू भन्दैछु जस्तो लाग्छ)।
यदि कसैले दुर्घटना वा ब्ल्याक स्पट रिपोर्ट गर्न पनि गाडी चलाउँदा आफ्नो मोबाइल उठाउनु हुँदैन भन्ने सोचिरहेको छ भने, हामीले सिरीलाई हाम्रो लागि यो गर्न भन्न सक्छौं भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। "हे सिरी, दुर्घटना रिपोर्ट गर्नुहोस्"
आईफोनमा एप्पल नक्सा अनुप्रयोगबाट, तपाइँ नेभिगेसन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तलबाट माथि स्वाइप गर्नुहोस् नयाँ विकल्प "रिपोर्ट" फेला पार्न। यो जहाँ तपाइँ नयाँ सुविधाहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » धेरै » जर्मनी र स्पेनमा एप्पल नक्साले प्रयोगकर्ताहरूलाई दुर्घटनाहरू रिपोर्ट गर्न अनुमति दिनेछ
Apple Watch ले नयाँ iCloud + सुविधाहरू प्रयोग गर्दैन
के तपाईंसँग म्याक प्रो छ र पाङ्ग्राहरू किन्न चाहनुहुन्छ? यो 58% छूटको फाइदा लिनुहोस्